Amazon Fire HD 10 famerenana: nanapaka ny ratsy manaporofo zorony iray lafo vidy fahadisoana - News Fitsipika
Amazon Fire HD 10 famerenana: nanapaka ny ratsy manaporofo zorony iray lafo vidy fahadisoana
amin'ny ankapobeny Score2
Amazonia Fire HD 10 Tsy takela-kazo tsara sy tsy hiaina mifanaraka amin'ny fitsipika napetraky ny alohany sy Amazon ny fitaovana hafa.
Ity lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Amazon Fire HD 10 famerenana: nanapaka ny ratsy manaporofo zorony iray lafo vidy fahadisoana” nosoratan'i Samuel Gibbs, fa theguardian.com ny zoma 6 Novambra 2015 07.00 UTC
The Fire HD 10 ny farany no Amazon feno mitovy habe tablette, nefa tapahiny zorony maro loatra ka tsy mora vidy.
Ny afo Amazon takelaka no nandona sy malahelo tao anatin'ny efa-taona. Dia manolotra mendrika efijery, antonony fepetra arahana sy ny fampidirana an-Amazon mafy ny tontolo iainana ny sarimihetsika, TV dia mampiseho, mozika, boky sy ny fampiharana amin'ny vidiny ambany dia ambany izay dia mampandamòka ireo zavatra hafa rehetra. The Fire HD 10 miezaka ny hanohy izany fironana.
Ny ambadiky ny takelaka dia malamalama plastika izay mitondra ny dian-tanana sy ny scratches mora. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Ny famolavolana ny Fire HD 10 dia tena utilitarian. Rakotra in malefaka, malamalama plastika izay niezaka ny hanamarika ao anatin'ny segondra ny fahazoana azy avy tao an-boaty, dia toa mora vidy.
Amazon nanao be fifanarahana momba ny takelaka rehefa maharitra sy ny sisa velona 200 mitodika any amin'ny orinasa nianjera fitsapana raha oharina amin'ny iPad Air 2'S 30. I latsaka izany fotoana vitsivitsy tao karipetra tsy mandika azy io, fa tsy niainga mba hiezaka sy handrava azy. Tsy mahatsiaro tsara mitambatra, fa ny tenany dia hentitra loatra kokoa noho izaho ho andrasana.
Ny bokotra sy ny seranana hamaritana ireo ambony rehetra lelan, izay midika hoe ny tananao na manarona ny boky bokotra sy ny seranan-tsambo na fahefana écouteur bokotra sy microUSB seranana, rehefa natao mba hijery ny lahatsary.
Amin'ny 7.7mm matevina dia mahagaga manify ny farany ambany-takelaka. Tsy voalamina tsara koa somary bezels manodidina ny 10.1in widescreen, izay mahatonga azy hahatsapa tery, fa ela ny takelaka. Amin'ny 432g tsy mavesatra loatra ny hihazona ny 40 minitra TV seho, fa tsy nahita ny tenako mitady any mba hampijoro azy rehefa miezaka ny hamita ny 2.5 ora sarimihetsika.
Ny hamolavola sy vatana no atao hoe OK. Ny lamba dia halatsako ihany ny lehibe indrindra amin'ny rehetra. Izany dia midika hoe 10.1in amin'ny 720p vahaolana sy ny ambany Pixel hakitroky ny 149 teboka isaky ny santimetatra. Fa fampitahana ny ankamaroan'ny takelaka manana, fara fahakeliny, 200ppi. Amazon teo aloha Fire lehibe HD, ny HD 8.9, nanana 1080p lamba amin'ny 254ppi.
Ny lamba dia tsy maranitra, izay mahatonga lahatsoratra, sary masina sy ny sary mijery latsaky ny miavaka. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Tsy maninona loatra ny lahatsary, izay manatrika passable, amin'ny salan'isa mijery tsara loko sy ny lafiny, fa ny soratra, sary masina, sary sy ny hafa mijery voasakantsakan'ny zavatra miharihary pixelated.
Tena mazava indrindra rehefa miezaka ny mamaky ny boky eo amboniny, izay toa zavatra avy amin'ny dimy taona lasa izay. Na ny Bookerly Amazon typeface manampy - ara ny Helvetica accentuates ny olana - hitako fa sarotra ny mamaky ny fanitarana vanim-potoana tahaka ny lahatsoratra dia tsy miavaka loatra fotsiny amin'ny habe kely aho namaky tokony.
Ny Stereo mpandray fitenenana eo amin'ny lafiny mahagaga ny takelaka dia tsara sy mafy ny tablette miteny. Na izany aza tsy mendrika ny hampiasa toy ny vita fanoloran-tena mpilalao mozika, Fa tsara noho ny fijerena horonan-tsary raha mahandro.
Screen: 10.1amin'ny (1280 X 800) LCD (149ppi)
Processor: MediaTek QUAD-fototra (1.5GHz fiaviana roa-fototra + 1.2GHz fiaviana roa-fototra)
Storage: 16 na 32GB; microSD slot hita ihany koa ao
Camera: 5MP aoriana fakan-tsary, 0.3MP anoloana-miatrika fakan-tsary
Fifandraisana: Wifi, Bluetooth
Malemy fitaovana mitarika ho amin'ny mahantra traikefa
Ny karatra microSD slot dia iray amin'ireo teboka miampy vitsy ho amin'ny Fire HD 10, mamela anao mba hanampy kokoa ny fitehirizana mora. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
The Fire HD 10.1 manana QUAD-fototra MediaTek processeur sy 1GB ny RAM, izay tsy niakatra ho any amin'ny asa ny powering ny takelaka. Misy zavatra nihazakazaka tsara, fa raha ny marina, na ara fandefasana azy ireo eo amin'ny asa samy hafa dia dogged iray ela haingana toy ampy mba hahatonga anao hanontany tena raha efa nianjera ny takelaka.
Rehefa manomboka ny takelaka voalohany ka izany miasa tsara. Loading voalohany ny lahatsary avy amin'ny Praiminisitra Amazon Instant Video miasa tsara ihany koa. Saingy rehefa manomboka ny entan'izy ny faharoa, na ny mifamadika ny anankiray fampiharana izay zavatra hanomboka To creak.
Video playback indraindray mety ho malama, Matetika malahelo fa zana-kazo sy ny judder. Swiping manerana ny homescreen afaka koa haingana toy ratsy, raha fametrahana fampiharana nitondra ny takelaka ho any amin'ny nandady.
Be tsipiriany ny lalao toy ny Real Racing 3 dia virtoaly unplayable, raha Tsangambato Valley na dia Niakanakana tsindraindray.
Ny bateria manodidina Naharitra fito ora ny lahatsary playback. Ny olana lehibe indrindra ho an'ny bateria ny fiainana dia ny lamba tsy manana fahazavana ambient sensor ka tsy zatra ny famirapiratry ny mazava ho azy, izay midika fa matetika loatra na loatra mamirapiratra vendrana.
Fa mamaly ny naka mandrakizay. Dia nitondra dimy ora mba tanteraka pepero ny Fire HD 10. Takela-bato ny ankamaroan'ny anjara-raharaha ao adiny roa na telo.
Wi-Fi fandraisana mahantra ihany koa. Ao amin 'ny toerana izay misy Google Rohy 6P na iPad Air 2 dia haka mafy Wi-Fi famantarana, manodidina 12m avy amin'ny ny router, ny Fire HD 10 Nitolona mafy. Download haingana ny fampiharana sy ny lahatsary ihany koa tena tsy mora. Ny aterineto any amin'ny ny router tsy ny mametra ny singa.
Fire OS 5 dia dingana teo aloha teo ambonin'ny Amazon fandidiana rafitra. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
The Fire HD 10 tonga ny farany amin'ny Amazon dikan-Fire OS 5, izay mifototra amin'ny tamin'ny taona lasa ny Android 5 Lollipop. Ny fampiharana mahazatra Grid tsy ampy amin'ny homescreen, fa swiping havia sy havanana ny manatsara amin'ny alalan'ny sokajy.
Swiping manerana ny boky, ohatra, mampiseho ny nividy boky tao an-tampon'ny, fanolorana boky maimaim-poana raha Amazon Prime na Kindle Unlimited ary avy eo dia tolo-kevitra kokoa ny order mifototra amin'ny tantara. Toy izany koa ny lahatsary mandeha, lalao, fampiharana, mozika, audiobooks, newsstand sy Amazon fiantsenana.
Ny ankavia-tena mampiseho vao haingana efijery ampiasaina na nijery zavatra, izany no fomba haingana indrindra ny fahazoana miverina ho afa-po.
Tsy miasa tsara, ary manao ny tsara indrindra ny fandaniana-monina takelaka. Io no takelaka voalohany rindrambaiko nahita aho fa lasa be any an-dafin'ny fampiharana fitsipika Grid ary arguably ny zavatra tsara indrindra momba ny Fire HD 10.
Fa ny sisa amin'ny rindrambaiko dia tsy tena toy ny tsara. Swipe midina hatrany ambony ka mahita fampahatsiahivana ary inona mijery toy ny napetraka ny haingana toggles ho Wi-Fi, Bluetooth, efijery fihodinan'ny, Tsy hanelingelina sy ny hafa. Fa raha ny marina no marina indrindra hitsin-dalana ho amin'ny toe-javatra efijery, tsy toggles, izay mandiso fanantenana.
Amazon kaonty iray tsy maintsy voasoratra anarana any ny takelaka, fa maro mpampiasa mombamomba ny mombamomba ny ankizy ao anatin'izany ny mety ho setup, izay tsara ho an'ny fianakaviana iray tablette.
Fire OS Android maro dia hihazakazaka fampiharana, fa ihany no manana ny fahafahana hahazo ny Amazon fampiharana fivarotana. Izany dia tsy mitsaha-mitombo fifantenana ny fampiharana, anisan'izany vola-ho fampiharana azo maimaim-poana eo ambany ny Praiminisitra Amazon "ambanin'ny tany" fampiroboroboana, Fa fantatro fa tsy ho lehibe toy ny Google Play ka tsy manana ny farany fampiharana sy ny lalao.
Ny dimy-megapixel aoriana fakan-tsary sy ny anoloany-miatrika VGA selfie fakan-tsary ny mahantra. Izy hisambotra pahina, vendrana, Mason'ny sary tsy ampy amin'ny an-tsipiriany.
Ny lockscreen mampiseho dokam-barotra raha tsy mandoa fanampiny £ 10 mba hanala ny 'tolotra manokana'. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Ny 16GB Amazon Fire HD 10 amin'ny dokam-barotra momba ny hidin-trano £ 170 ny vidin'ny lamba mainty na fotsy. Ny dikan 32GB vidin'ny £ 200, raha manala ny dokam-barotra fandaniana £ 10.
Ny toy izany koa Samsung Galaxy Tab 9.7in vidin'ny A £ 179, raha ny lavitra 8in ambony Galaxy Tab S2 vidin'ny £ 240 avy Amazon amin'ny 32GB ny fitehirizana. Ny mora indrindra Apple iPad ny vidin'ny £ 219. Tesco ny Hudl 2 lafo £ 99, ary maro ny tamin'ny taona lasa farany takelaka ambony-izay afaka hanao manodidina £ 200.
Fire vaovao OS 5 manana hevitra tsara, ary dia dingana niakatra avy teo aloha dikan 'ny fandidiana rafitra. Amazon ho faty-hards dia toy ny fampidirana ny orinasa sarimihetsika, TV, boky sy ny asa.
Fa ny 10in efijery marina dia tsy avy amin'ny avo ampy fanapahan-kevitra mba hahatonga ny ankamaroan'ny Amazon ny tolotra, ny processeur dia tsy ampy mba hihazakazaka mahery be tsipiriany ny lalao Ary na dia tsotra lags amin'ny asa.
Ny olana lehibe indrindra amin'ny Fire HD 10 dia fa tsy mora vidy. Raha izany £ 100, ny ankamaroan'ny fahadisoana mety ho voavela, fa amin'ny £ 170 maro ireo mifaninana tsara kokoa vato fisaka izay manolotra zavatra niainana.
Mahatsara: Amazon lehibe fampidirana, Tafavoaka velona nilatsaka vitsivitsy tsy nandika, microSD karatra slot
Maharatsy ny mifampiresaka: ambany vahaolana efijery, miadana processeur, laggy fampisehoana, malemy Wi-Fi, Tsy tonga dia famirapiratana fanitsiana, mahantra fakan-tsary, tena miadana fa mamaly ny
Tesco Hudl 2 famerenana: be dia be ny takelaka ho an'ny vola
Amazon Fire HD Kids Edition tablette famerenana
Amazon.com, Android, Article, Gadgets, Kindle Fire, Famerenana, Samuel Gibbs, Tablet ordinatera, Teknolojia
← Ahoana no hanjanaka Mars Dimy Mars fikarohana izay nanova ny fahatakarantsika ny planeta mena →